Posted by pandora at 5:21 PM
thanks for sharing the poem ma pan. ur poem makes me remember Nay Phone Latt. i wish him to get out of prison cell soon.
နှုတ်တိုက်ကဗျာကို နှုတ်တိုက် အသံသွက်သွက် ထွက်၍ ရွတ်ဆိုသွားကြောင်းပါ မပန်ရေ...
နှုတ်တိုက်ကဗျာ ကို နှုတ်တိုက်ရွတ်သွားတယ် အဆုံးသတ်ရောက်မှာ စာရေးသူပြောချင်တာကို ယောင်ဝါးဝါးလေးမြင်တယ် ။ တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်အုံးမှ သိပ်လည်းမသိသေးဘူးး ။
နှုတ်တိုက်ကဗျာကို ဘလော့ဂ်ဖတ်ရင်းလဲ နှုတ်တိုက်ရွတ်နေတယ်…
ထူးခြားတာက သူလဲရွတ် ငါလဲရွတ် အကုန်ရွတ်နေကြတယ်…
တိုးတိုးလေး…တကယ်တော့ နှုတ်က ရွတ်တာ မဟုတ်ဘူး…နှလုံးသားတွေက ရွတ်နေတာ….
ဘယ်နည်းမှ မရှိတော့ရင် ရှေးတုန်းကလိုပဲ နှုတ်တိုက်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တယ်။ ဟုတ်တာပဲ။ တရားစာတွေလိုပေါ့။
မေတ္တာပို့ တာမဟုတ်သ၍ ပြဿနာ မတက်နိုင်ဘူး။ မှန်တယ်။
လူတစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကို စကားပို့ တဲ့ ပျော်ပွဲစားက ကစားနည်းလိုပေါ့။
နောက်ဆုံးလူရောက်ရင် ဆိုရင်းအဓိပ္ပါယ် မပျက်တန်ကောင်းပါရဲ့ ။
ပန်ပန့် နှလုံးသားထဲက နှုတ်တိုက်ကဗျာက လူတိုင်း ရွတ်နေကြပါလား။ ဒါပေမဲ့ တိုးတိုးလေး..
နုတ်တိုက်ကဗျာ ကို ဖတ်ရင်း မျိုးဆက်သစ်တွေကို လက်ဆက်ကမ်းရမဲ့ အိပ်မက် အသစ်ကို မြင်ရောင် တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာမရဲ့... ဟဲဟဲ နောက်တာနော်
နှုတ်တိုက်ကဗျာကို နှုတ်တိုက်ရွတ်ရင်း နှုတ်တိုက်ကျက်သွားကြောင်း၊
ကဗျာကတော်တော် လေးနက်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ကျွန်တော် ကြိုက်ပါကြောင်း :-)
ညီညီရေ.. Of coz, I meant it.
မသက်ဝေ ရေ ရွတ်နိုင်ပါတယ်။
မောင်မျိုး.. ထပ်ဖတ်ရင် သိချင်သိသွားနိုင်ပါတယ်လေ။
မ. မနော်ဟရီ. အမြဲလာအားပေးလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်
မတန်ခူး မမိုးချိုသင်း မမြတ်နိုး.. ရွတ်သံတွေ ကြားနေလား။
မအယ်ဇီ တွေးသွားတဲ့ ရှုထောင့်က ပိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။ ဟုတ်တယ်နော် နောက်ဆုံးလူဆီရောက်ရင် ဘာကြားကြမလဲ။
ကိုငြိမ်းချမ်းအောင် .. သိသားနဲ့လေ။
မပန်ရေ - ဒီကဗျာလေး လာဖတ်တာ နောက်တောင်ကျနေပြီ။ မပန်ကဗျာလေးဖတ်ရင်း ရေးဖော်ရေးဖက်ကြီးကို တကယ်ပဲ သတိရတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာမဆိုလုပ်နေနိုင်ကြပေမယ့် သူ့မှာတော့ စာရွက်ပိုင်းပေါ်မှာတောင် ကဗျာသီခွင့်မရတော့ဘူးလေ။ ဒီကဗျာတစ်ပုဒ် ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်ဖို့ သူ ဘယ်လောက်စွန့်စားကြိုးပမ်းခဲ့သလဲ ကျွန်တော်တို့ တွေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် - ကိုယ်ချင်းစာတယ် - နောက် ခံပြင်းမိတယ်။
နှုတ်တိုက်ရွတ်နေကြမယ် တို့အားလုံး အတူတူ စိတ်ခွန်အားတွေ အပြည့်ထည့် ထားကြရမယ်..စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့..